umbuzo iinqanawa ...
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #197 by PAYSON
Ngokuqinisekileyo angathanda ukubona omnye okanye emibini abathwali moya WWII.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #198 by Gh0stRider203
ya siyazi ukuba asyingcamango indoda embi!
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #202 by PAYSON
Yintoni na uthando? Ndilungile? 1 okanye 2 WWII yenethiwekhi zisa izithuthi. Musa ukuthatha kakubi, ndiyamthanda slammin 'phezu kwayo esinayo ngoku, kodwa kancinci ez kakhulu kunye Corsair zakutshanje (nangona akukho moya II, lalisebenzisa abathwali efanayo). I zamvanje iinqwelomoya yenethiwekhi a goooody. Kakade ke, zonke iikati Grumman ubambe indawo ekhethekileyo entliziyweni yam. I sibe nenguqulelo fsx ka ekhangeleka ukuba bitchin 'WWII top tyaba, nje awukwazi ukufumana phandle uzifake njani. Ayinayo nomfakeli efanayo Rikooo uye. Kufanele ukuba ukubaleka, (ngokoqobo, babemelwe kukukwenza joggin abanye ')
Buyela amafu, PAYSON
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #207 by Gh0stRider203
Andikwazanga uyavumelana ngaphezulu. kusoloko kumnandi ukuzama ukugcina izinto ezizizo kangangoko kunokwenzeka
I ngokunyanisekileyo ube unakekelwa indlela yokufaka nqanawa ngaphandle kokuba ifayile phambi kwam. I kuthathwa kuphela ukuba wayeza kumisela ukuba incwadi eneenkcukacha indawo, yaye ukuba va nga yongezwa ngokuzenzekelayo FSX, bese uyifaka ngesandla ...
Ixesha ukwenza page: 0.220 imizuzwana